स्मार्ट टेलिकमको फोर-जी सेवा सुरू हुदै. – Insurance Khabar
स्मार्ट टेलिकमको फोर-जी सेवा सुरू हुदै.
प्रकाशित मिति : १० कार्तिक २०७४, शुक्रबार ०६:०३
११ कात्तिक, काठमाडौं । स्मार्ट टेलिकमले पनि चौंथो पुस्ताको दूरसञ्चार सेवा (फोरजी) सेवा सुरू गर्ने भएको छ । स्मार्टले आफ्ना ग्राहकलाई आइतबार (१२ कात्तिक) देखि फोरजी सेवा उपलब्ध गराउन सबै प्राविधिक तयारी सकिएको जनाएको छ ।
अहिले परीक्षणका रुपमा सुरु हुन लागेको सेवालाई केही समयभित्रै व्यवसायिक रुपमा लागू गर्ने जानकारी कम्पनीले दिएको छ । केही समयपछि चितवन, वरीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा पनि फोरजी सेवा पुर्‍याइने राजभण्डारीले बताए । फोर-जीको सुरुवातका अवसरमा विभिन्न डाटा योजना पनि ल्याइएको छ ।
गत जेठमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई पनि फोरजी सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । स्मार्ट टेलिकमसँग १ हजार ८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । यसमध्ये ५ मेगाहर्जलाई उसले फोर-जीमा उपयोग गर्न लागेको हो ।
प्राधिकरणले यथासम्भव नेपालभर सेवा संचालन गर्नुपर्ने, प्रत्येक ३ महिनामा कार्यप्रगति प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने, क्षेत्र विस्तार तथा गुणस्तरका सम्बन्धमा प्राधिकरणले समय-समयमा दिइने निर्देशन पालना गर्नुपर्ने शर्तसहित लाइसेन्स दिएको थियो ।
नेपाल टेलिकम र एनसेल ले यसअघि नै फोरजी सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छन् । संशोधन गरिएको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी) नीतिले पुरानै ब्यान्डको फ्रिक्वेन्सीमा नयाँ सेवा सुरु गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।
फोरजी भनेको ‘फोर्थ जेनेरेसन वायरलेस’ अर्थात चौथो पुस्ताको ताररहितको इन्टरनेट डाटा प्रविधि जुन मोबाइल इन्टरनेट प्रबिधिमा सवैभन्दा पछिल्लो प्रबिधि हो!
पछिल्लो प्रबिधि भएको हुनाले स्वभाविकरुपमा फोरजी थ्रीजीभन्दा तिब्र गतिको हुन्छ । आइटियूको मापदण्ड अनुसार १ सय मेगाबिट्स प्रति सेकेन्ड (एमबीपीएस) गतिको इन्टरनेट सहितको सेवालाई फोरजी भनिन्छ । बिभिन्न देशमा टेलिकम कम्पनीहरुले १ सय एमबीभन्दा कम क्षमतामै फोरजी सेवाका रुपमा चलाइरहेका छन् । नेपाल टेलिकमले भने ३० एमबीपीएसमा फोरजी चलाइरहेको छ ।